Fambolena sy fambolena sesame, sarin’ny zavamaniry. Tombontsoa ilaina amin’ny sesame
Ahoana no ahafahan’ny tsiranoka ary inona no ilaina.
Sesame Homeland — Afrika. Efa hatry ny ela no nitombo tany Ethiopia, Ejipta, Gresy, Iran ary Inde. Tany amin’ny ampahany Eoropeana ao Rosia dia nanamboarana seza ny taokanto tamin’ny faran’ny taonjato faha XIX. Ao amin’ny 1970 irery ihany, manodidina ny 5,8 tapitrisa hektara ilay faritra maneran-tany. Ny sehatra koa dia mitombo ao Rosia, indrindra indrindra any amin’ny Faritra Krasnodar sy Stavropol.
Amin’ny ankapobeny, mitombo ny tsiranoka mba hamokarana dibera. Ny menaka mangatsiaka no manavaka ny kalitao avo lenta (oliva mpisolo toerana), ampiasaina amin’ny sakafo, ary koa amin’ny famokarana sakafo voatahiry, margaraine, siramamy ary fanafody.
Avy amin’ny voamaina sy ny voany no ahazoana menaka — tahini oil, izay manao halva.
Ny menaka maina nampiasaina dia ampiasaina amin’ny tanjona ara-teknika.
Firenena maro no mampiasa sesame voa mivantana amin’ny sakafo (mena, mofomamy, mafana). Ao Rosia, efa ela no nahafantarana ny fantsom-boankazo ary tia ny ankizy sy ny olon-dehibe. Mifandraika amin’izany, ny fambolena sesame any amin’ny toeram-pambolena indostrialy dia tena mahasoa ary hatramin’izao dia tsy dia misy raharaham-barotra ny fifaninanana (eo amin’ny sary etsy ambony dia hita taratra ny fisian’ny sesame amin’ny sehatra indostrialy).
Ny zavamaniry dia mahatratra hatramin’ny 2 m avo. Ny tselatra dia manangona, sampana, efatra na octahedral ao amin’ny fizaran-tseza, amin’ny endriny sasany izay manjavozavo ny fasasy, matetika voakasika volon-drongony, maitso na anthocyanine. Ny isan’ireo sampana hafa dia avy amin’ny 3 ka 15.
Taproot dia miditra amin’ny tany amin’ny halavan’ny 1 m, ny rantsany aty aoriana dia mifantoka indrindra amin’ny faritra ambony. Ny latsaky ny ravina latsaky ny latsaky ny latsaky ny ravina, izay mazàna kokoa kokoa sy lehibe kokoa noho ny manaraka.
Ny voninkazo dia lehibe, amin’ny fametavetana fohy, no miforona ao amin’ny ravinkazo amin’ny 1-3, zara fa 5.
Ny voankazo sesame — 4-6-8-lavaka baskety lava 3 hatramin’ny dimy santimetatra. Rehefa mipoitra ny voan-tsimparifary, dia mitsambikina eo amin’ny lalan-tsorok’izy ireo, ary mihintsana ny voa.
Boky iray misy momba ny masomboly 80 amin’ny loko isan-karazany — avy amin’ny fotsy ka hatramin’ny mainty; Ny lavany dia 2,5-2,5 mm, ny width 1,6-2 mm, masomboly an’arivony 2-5 g.
Mamafy voan-tsimparifary ao anaty tany mafana (hatramin’ny 20 ° C) amin’ny karazan-tsipika 45-60.
Sezam Seed Rate ho an’ny fambolena — Gramin’ny 0,6 ho zato, ny halalin’ny fametrahana 3-4, jereo. Mitaky hafanana ny zavamaniry.
Amin’ny vanim-potoana azo avy amin’ny famafazana sesame midina amin’ny voninkazo dia mitaky fitomboana goavana amin’ny haavon’ny hafanana ao amin’ny tany. Aorian’izany dia manaiky tsara ny hain-tany izy, saingy iharan’ny atmosfera.
Ilaina ny manamboatra sy mamahana. Tsy mahasolo ny saline sy ny loto mavesatra.
Ao anatin’ny kolontsaina iray ao Rosia, ny karazana sesamika Indiana dia miely patrana.
Azo atao ny mamboly sesame sy dacha, amin’ny teti-bola manokana. Izany dia miankina, mazava ho azy, amin’ny tanjona inona (momba ny toetra mahasoa ny sesame etsy ambany).
Afaka novidina ny voamadinika teo aloha, anisan’izany ny ao amin’ny Institute of Oilseeds, izay any Krasnodar, ankehitriny dia tsy azontsika lazaina azo antoka.
Sesame — toetra mahasoa
Manan-danja maro karazana zavamaniry misy sesame, voa sy ny vokatr’izany, miaraka aminy. menaka.